ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ Miyazaki ရုပ်ရှင်များမှစတူဒီယို Ghibli နောက်ခံပုံများ• musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း အမနာပစကား ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ စတူဒီယို Ghibli ၏နောက်ခံပုံများမှာ ...
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ Miyazaki ရုပ်ရှင်များမှစတူဒီယို Ghibli နောက်ခံပုံများရနိုင်သည်
21ပြီလ 2020, XNUMX
အဆိုပါ quarantine ဘို့ငါတို့ကိုယ်ကို၏အဖြစ်မှန်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် patrenti မှသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု။ ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှပစ္စည်းနဲ့အဝတ်ကိုမပေးနိုင်လဲ။ အခန်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးလား ဒါပေမယ့်အခုဒီမှာ cinephile နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာစိတ်ကူးယဉ်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုပါ။
> Coronavirus နှင့် video chat - အနီးကပ်ခံစားရရန်အကောင်းဆုံးသောအစီအစဉ်များ
စတူဒီယို Ghibli၏ကျော်ကြားရုပ်ရှင်စတူဒီယို ဂျပန်ကာတွန်း, ၏ Totoro အဘိဓါန်eမင်းသမီး Mononokeသူကတစ် ဦး ထား၏ ၎င်း၏ site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါ နောက်ခံပုံတချို့ မိမိအအကျော်ကြားဆုံးရုပ်ရှင်အားဖြင့်မှုတ်သွင်း။ သင်၏နောက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွင်ဆွေမျိုးများနှင့်အတူသို့မဟုတ်အလုပ်တွင်အသုံးပြုရန်။
> စတူဒီယို Ghibli ၏ကာတွန်းကားများသည် Netflix သို့ရောက်ရှိသည်
ပေးလိုက်ပါ ရှစ်ဆယ် စတူဒီယို Ghibli သည်ကာတွန်းပရိသတ်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ပုံဆွဲမှုများနှင့်ပုံပြင်များကိုပြောပြရာတွင်သူ၏ခဲယဉ်းသောအရာများနှင့်မတူပါ။ ဒါရိုက်တာများကတည်ထောင်ခဲ့သည် Hayao မီယာဇာကီeIsao Takahata၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရသည့်အထိမကြာမီကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိဂျပန်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များအတွက်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်လာသည် အကောင်းဆုံးကာတွန်းကားများအတွက်အကယ်ဒမီဆု နှင့် အဆိုပါဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်မြို့။ Miyazaki နှင့် Takahata တို့သည်အစမှ စ၍ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးသောကာတွန်းရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ထွက်ခွာခဲ့ကြသည် လူ့စိတ်ထဲ၏အတိမ်အနက်ကို နှင့်ရုပ်ပြ ဘဝနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း», အစစ်အမှန်လက်ရာမှဘဝပေးခြင်း။
"The Enchanted city" ၏နောက်ခံပုံများ (ရင်းမြစ် - စတူဒီယို Ghibli)
နှင့် ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့နောက်ခံပုံများ သငျသညျလမ်းကြားက de မှတဆင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်မြို့, အတွက်အခြေချ ကိတ်မု di Kiki အိမ်ဖြန့်ဝေ သို့မဟုတ်၏ဂျီသြမေတြီအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရရ Laputa - ကောင်းကင်၌ရဲတိုက်။ သို့သော်ထိုမျှမက: ထိုပန်းချီကားများလည်းလာ Howl ရဲ့ Moving Castle, မင်းသမီး Mononoke, လေချိုင့်ဝှမ်း၏ Nausicaa, ချောက်ထဲမှာ Ponyo နှင့်များစွာသောအခြား။
ပုံတွေတကယ်တော့အမြဲတမ်း update လုပ်နေကြသည်။ ပြီးနောက် ဒေါင်းလုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ စတူဒီယိုသည်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းများကိုစီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်တောင်းဆိုသည်။
နောက်ခံပုံများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ အသုံးပြုနည်း
ပြီးတာနဲ့အနေဖြင့် download လုပ်ပါ ဆန်ခါ သင်အကြိုက်ဆုံးနောက်ခံပုံများ၊ နောက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွင်၎င်းကိုမည်သို့ပြသမည်နည်း Zoom ပေါ်တွင်? ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ Settings များရွေးရန် Virtual နောက်ခံ (Virtual screen) နှင့်“ +” ကိုနှိပ်ပါ သင်၏ virtual နောက်ခံကိုရွေးချယ်ပါ ရွေးချယ်ထားသောဓာတ်ပုံကို upload လုပ်ရန်နှင့် Studio Ghibli ဖန်တီးမှုကိုခံစားရန် (သင်၏ virtual နောက်ခံကိုရွေးချယ်ပါ) ။
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအဆုံးမှာထိုစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကိုမေ့သွားသူများအတွက်ဖြစ်သည်u Netflix နဲ့ ကာတွန်းအိမ်၏အကျော်ကြားဆုံးလက်ရာအချို့ကိုအမြဲရရှိနိုင်သည်.
> Netflix မှာAprilပြီလမှာဘာတွေကြည့်ရမလဲ။ ရုပ်ရှင်တွေ၊
ဆောင်းပါး ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ Miyazaki ရုပ်ရှင်များမှစတူဒီယို Ghibli နောက်ခံပုံများရနိုင်သည် အပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ဟန်ရှိသည် iO အမျိုးသမီး.
ယခင်ဆောင်းပါးဘုရင်မအဲလစ်ဇဘက် - သူမသည် (၉၄) နှစ်လုံးလုံးလောက၏လူမှုရေးဆန္ဒများ (ဟယ်ရီနှင့်မက်ဂန်မာ့ခ်တို့၏ဆန္ဒများမဟုတ်ပါ)
နောက်ဆောင်းပါးCoronavirus, အကယ်၍ drive-ins များသည်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ပြန်သွားလျှင်ကော။
မိခင်များနေ့၊ ၂၀၀၀၊ အလှဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားစုများ
Heidi Klum သည် ၂၀၀၃ VS ဖက်ရှင်ပြပွဲတွင်အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့ရှိမှုဖြစ်သည်
Billie Eilish သည် LACMA Gala 2021 တွင် အလွန်လှပသည်။
နိုဝင်ဘာ 10, 2021